प्रदेश प्रमुखको गाडी खरीदमा करोडौं निकासा | गृहपृष्ठ
Home समाचार प्रदेश प्रमुखको गाडी खरीदमा करोडौं निकासा
on: ३२ असार २०७५, सोमबार १०:१४ समाचार
प्रदेश प्रमुखको गाडी खरीदमा करोडौं निकासा
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखहरूका लागि गाडी खरीद गर्न जेठ महीनामा मात्रै रू. ४ करोड २० लाख निकासा गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक प्रदेश प्रमुखका लागि गाडी किन्न रू. ६० लाख दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश प्रमुखहरूको भौतिक सुविधाअन्तर्गतको शीर्षकमा सो रकम निकासा गरिएको हो ।
यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषअन्तर्गतको रू. १० अर्बसमेत निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो रकम भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास अनुदानका निम्ति निकासा गरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा गरिएको सो रकम भूकम्पपीडितले पाउने हुन् या होइनन् भन्नेचाहिँ चासोको विषय बनेको छ ।
भ्रमणका नाममा एकै महीनामा विभिन्न मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले रू. ६५ लाखभन्दा बढी निकासा गरेको छ । मन्त्री एवम् प्रतिनिधिमूलक टोली विभिन्न देशमा जा“दा लागेको खर्च अर्थले निकासा गरेको हो । सबैभन्दा बढी रकम पाउनेमा परराष्ट्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १ महीनामा रू. ७० लाख निकासा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले केही विकास आयोजनाका निम्ति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम दिएको छ । त्यसमध्ये बर्दियाको बबई नदी नियन्त्रणका नाममा रू. १० करोड निकासा गरिएको छ । साथै सोही आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि एकै महीनामा छुट्टै रू. ३ करोड ६३ लाख रकमान्तर गरिएको छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाका निम्ति भने मन्त्रालयले रू. ४ लाखमात्रै छुट्ट्याएको देखिन्छ ।